Service - Mika Optoelectronic Co., Ltd
High Power Kwakaita
BASA ROKUITA CASE
Akatungamirira Corn Light Case
Akatungamirira HIGH Bay Case
Akatungamirira STREET CHIEDZA Case
Akatungamirira MAFASHAMU CHIEDZA Case
Tanera CHIEDZA Case
Akatungamirira Street chiedza
C Series Street chiedza
E Series Street rambi
S dzakatevedzana mumugwagwa chiedza
All muchiedza rimwe rezuva akatungamirira mugwagwa
Akatungamirira zviyo chiedza
ETL chibage rambi dzakatevedzana
Waterproof zviyo rambi
Mini dzino chibage rambi
Akatungamirira Shoebox Light
Akatungamirira kanopi Light
A Series UFO mukuru Bay chiedza
C Series UFO High bheyi Light
D dzakatevedzana UFO High Bay Light
E akatevedzana UFO highbay chiedza
L Series UFO Highbay chiedza
Akatungamirira Wall rongedza chiedza
Akatungamirira Module Light
Akatungamirira Tunnel Light
B dzakatevedzana akatungamirira Tunnel Light
C dzakatevedzana akatungamirira Tunnel Light
Akatungamirira Tube Light
Akatungamirira Panel Light
Akatungamirira girobhu racho Light
Chii chinonzi zviyo chiedza?
Development okumugamuchira Street chiedza
Stadium okuvimba mhinduro
Ko akatungamirira kumiririra?
Akatungamirira ndiyo pfupi kuti chiedza-emitting diode.
Kwenguva yakadii LEDs yakareba?
LEDs vane mbiri nokuti zvinhu zvikuru inogara kwenguva refu. LEDs Vazhinji vane yavose sezvavakatarirwa upenyu anosvika 50,000 maawa. Izvi zvinenge 50 nguva yakareba kupfuura nezvekumwe incandescent, 20-25 nguva yakareba kupfuura nezvekumwe halogen, uye 8-10 nguva yakareba kupfuura randinenge CFL. Used maawa 12 pazuva, rimwe 50,000 girobhu racho kuchapedza kwemakore anopfuura 11. Used maawa 8 pazuva, richagara makore 17!
Ndokupi LEDs kushandiswa?
Vanogona kushandiswa panenge kwese. Akatungamirira kutsiva vari kare dziripo girobhu racho mhando akadai A-chimiro, PAR reflectors, MR reflectors, decoration, undercabinet, uye zvakawanda. Parinoshandiswa pamusoro dimmers, kunyanya dimming hurongwa kuti kutsigira Mabumba zhinji, isu hunoratidza kuedza munhu LEDs shoma kutanga kuti vaone.
Ndezvipi zvakanakira Kuenda kwakaita?
Zvakanakira Kuenda kwakaita vakawanda. Heano chete zvimwe zvakanakira: LEDs vanoshandisa ndoda magetsi pane dzimwe Mabumba, vane hwakareba yavose sezvavakatarirwa upenyu, berekai zvikuru shoma kupisa, regai emit UV kana michini, risina mekuri, husingakwanisi ungazoshamisa uye vibration, uye anogona kushanda zvinobudirira mu zvikuru chando runyararo. Kuti uwane mamwe mashoko zvakanakira akatungamirira,
Nei LEDs mari kupfuura mamwe marudzi Mabumba? Vari zvakakodzera?
Akatungamirira ichiri itsva ano, uye ishandiswe kubudisa yepamusoro chigadzirwa achiri kumusoro. Zvisinei, Pricing yasvika pasi zvinoshamisa kubva makore mashomanana apfuura uye mitengo vanotarisirwa kuramba kusiyira. Maererano kana LEDs munokosha imwe mari, zviri zvinobatsira kutarisa mutengo kushanda rimwe girobhu racho kuwedzera kumusoro-mberi mutengo. The simba mari vakaziva mune chinja kuna akatungamirira zvinoreva kuti imwe kumusoro-mberi mutengo rinowanzoshandiswa kudzorerwa nani nokukurumidza, uye imi muchava vanodzamara mari pamusoro poupenyu girobhu racho. Heuno muenzaniso: nokuti chokugara mutengi vangava chiedza pamusoro chete 10 maawa pavhiki Ñ ari payback riri pamusoro makore 10. Ukuwo, munhu Retail kana resitorendi yeGmail.END_STRONG uyo rinopfuta mwenje kwemaawa 90-100 pavhiki kuchaita overenga payback dzavo pamusoro $ 70 akatungamirira PAR kuva mwedzi isingasviki 18. Tikatarisa kwako payback kufungidzira inofanira zvachose kuva nehanya pakusarudza kana akatungamirira zvakakunakira.
Chaizvoizvo pane musiyano $ 10 akatungamirira uye $ 50 akatungamirira?
Ehe. LEDs akanyatsojeka akafanana nevatengi zvemagetsi uye unhu chaizvo. Kuti ive zvakatungamirira ishande zvakanaka uye pave zvinogamuchirika chiedza goho, vose zvakamisa hurongwa inofanira kuvakwa kuti zvigare. Nguva dzose pfungwa yakanaka kutenga kubva mugadziri uye retailer kuti uri chivimbo vachamira kuseri chigadzirwa. Kana uchida kudzidza zvakawanda pamusoro zvinoriumba uye sei cheaply akagadzirwa LEDs vanounganidza kuzorwisa pamusoro-yepamusoro chigadzirwa,
Ko chinhu chakaita kuenda kubereka chiedza zvokuti kutsiva girobhu racho yangu iyezvino?
For mafomu vakawanda, hongu. Off the-pasherefu akatungamirira zvigadzirwa zvino yakavimbika kutsiva incandescent neShanduro anosvika 100 watts or, uye dzakagadzirirwa zvigadzirwa zviripo kuti kutsiva kunyange yepamusoro wattages.
Chii unhu akatungamirira chiedza?
Kana ukatenga yepamusoro chigadzirwa, chiedza unhu ndiyo yakanaka. Color neshanduro Index (CRI) rinowanzoshandiswa kushandiswa kuyera chiedza unhu pamwero kubva 1-100. LEDs Most vane CRI Rating vanenge 80, uye vakawanda vari kunzi 90 uye pamusoro.
How girini vari LEDs?
LEDs vari girini chaizvo. For Mutange, vanoshandisa ndoda magetsi pane dzimwe dzakawanda chiedza zvigadzirwa. Izvi zvinoreva kuti zvishoma magetsi inofanira achibudiswa ishande navo, uye zvichiguma dzakaderera choutsi kubva simba anosima, kunyanya munzvimbo miti marasha-vanogumurwa kunowanzoitika. Kusiyana CFLs, dzine hapana nemekiyuri. Nokuda upenyu hwavo refu, ivo kuderedza hwakasimba tsvina: Kana iwe kutsiva munhu incandescent girobhu racho ane akatungamirira, iwe uchava kudzivirira mashanu 1,000 awa incandescent Mabumba kubva aizokandwa kure. Uyezve, havana kubereka shoma kupisa uye anogona kuderedza simba kushandiswa chekuita HVAC. The US Department of Energy yave zvinofungidzirwa kuti zvakawedzera kuitwa LEDs mumakore 15 akatevera kwaizoratidzawo kuderedza magetsi kunoda nechiedza kuburikidza 62 muzana, kudzivirira mamiriyoni 258 arşive matani kabhoni choutsi, uye kubvisa kudikanwa 133 itsva simba miti.
Anogona LEDs kushandiswa dimmers?
Kazhinji, hungu. LEDs vakawanda zvakananga dzakanyorwa sevari dimmable. Vamwe dimming hurongwa kushanda LEDs nani pane vamwe, saka zvakanaka kuti aedze imwe kana maviri asati zvachose kuzodzosera lamping imwe nzvimbo.
Vanofanira LEDs kushandiswa akanyudzwa Fixtures?
Kwete kana vari akanyudzwa zvachose. Kuti ive zvakatungamirira kushanda nemazvo, vanofanira kuva isiri akanyudzwa yechigarire kuti allo
MIKA 720w mafashamo lignting nokuti Austria stadi ...
Akatungamirira High Bay
© Copyright - 2010-2018: All Rights Reserved. pcb gungano
Online vatengi hurongwa